Newcastle United Oo Bar-Bardhac Ku Qabatay Man City, Xiddigii Liverpool Ee Jonjo Shelvey Oo Wadnaha Jaray Sky Blues & Rajadii Guardiola Ee Horyaalka Oo Ceel Ku Dhacday. - Gool24.Net
Newcastle United Oo Bar-Bardhac Ku Qabatay Man City, Xiddigii Liverpool Ee Jonjo Shelvey Oo Wadnaha Jaray Sky Blues & Rajadii Guardiola Ee Horyaalka Oo Ceel Ku Dhacday.
Kooxda Newcastle United ayaa bar-bardhac ku qabatay Manchester City oo marti u ahayd, Sky Blues ayay laba jeer hoggaanka u dhiibeen Sterling iyo De Bruyne balse goolal ka kala yimid Willems iyo Shelvey ayaa dhibic siiyay Magpies.
City ayaa markale laba dhibcood oo muhiim ah lumisay iyadoo ay sii yaraanayso rajadeeda difaacashada horyaalka ee xilli ciyaareedkani.
Ugu horreynba Manchester City ayaa Newcastle kala wareegtay maamulka iyo xakamaynta kulanka iyagoo ku qasbay Magpies inay dib daafac u galaan.
Fursadii ugu horreysay ee ugu wacnayd ayaa timid daqiiqadii 18-aad, Fernandinho ayaa madaxeeyay kubad koorne ahayd oo uu soo tuuray De Bruyne balse isku daygiisa ayaa halka sarre ka maray birta goolka.
Newcastle ayaa markeeda ku dhawaatay inay dhibaatayso City, Jonjo Shelvey ayaa laad xor ah ka laagay meel garabka bidix ee garoonka xigta, Kubaddiisa oo xooganayd joog hoosena ahayd ayaa wax aan badnayn u jirsatay goolka Ederson uu masuulka ka ahaa.
GOOAL: Goolka koowaad ee kulankan ayaa yimid, Raheem Sterling ayaa hoggaanka u dhiibay City isaga oo meel aad ugu dhaw goolka xerada ganaaxa dhexdeedana ah baas ka helay David Silva isla markaana si furan kubadda gees uga dhigay goolhaye Dubravaka.
GOOAL: Hoggaanka City ayaa noqon mid waaray, Jetro Williams ayaa markiisa goolka kasoo guday Magpies, Marka hore Almiron ayaa kubadda kusoo jiitay daafaca City isaga oo meel goolka hortiisa ah kubadda u dhigay Williams kaas oo kubad hoose oo xoogan ganay dhinacna ka dhigay Ederson.
Sterling ayaa markale isku dayay inuu hoggaanka usoo celiyo City, Xiddiga ree England ayaa markan banaanka ganaaxa kubadda kaga laagay goolka Newcastle balse darbada oo badhtamaha goolka ku beegnayd ayuu badbaadiyay Dubravaka.
Gabriel Jesus oo kulankan booskii Sergio Aguero buuxinayay ayaa markiisa xerada ganaaxa dhexdeeda ka helay kubad hadiyad ah oo uga timid Sterling, Jesus ayaa dhinac ku beegay kubadda oo uu laagay balse markale Dubravaka ayaa la tacaalay halista City.
Qaybta hore ee kulanka ayaa kusoo dhammaatay bar-bardhac min hal gool ah iyadoo goolkii furitaanka ee Sterling uu saddex daqiiqo gudahood ku kansalay Jetro Williams.
Manchester City ayaa qaybta dambe qaaday weeraro xoogan, De Bruyne ayaa kubad uu banaanka xerada ganaaxa la laagay dul mariyay goolka Newcastle daqiiqadii 55-aad halka Jesus uu daqiiqado kaddib fursada uu kubadda madaxa ku darbeeyay helay balse uu ku fashilmay inuu gool u bedelo.
Gabriel Jesus ayaa fursado dhawr ah helay iyadoo ay City ahayd kooxda weerarka ah balse weeraryahanka ree Brazil ee booskii Aguero buuxinayay ayaan awoodin inuu gool u bedelo fursadahaas.
GOOAL: Goolka labaad ee Sky Blues ayaa ka yimid De Bruyne, Daafaca bidix ee Mendy ayaa kubad ku karoosay goolka Newcastle balse daafaca kooxdaas ayaa iska soo saaray waxaana banaanka xerada ganaaxa ka helay De Bruyne oo laabta ku xakameeyay kubadda shuud gantaal ahna dhex dhigay goolka Newcastle iyadoo birta sarre ay hoos u celisay kubadda.
GOOAL: CAJIIB, Lix daqiiqo kaddib goolka De Bruyne Newcastle ayaa diiday inay ka hadho City, Jonjo Shelvey ayaa markiisa darbad meel fog ah goolka ugu keenay Magpies isaga oo kulanka ka dhigay 2-2.
Ugu dambayn, Kulankan ayaa kusoo dhammaaday 2-2 ay Newcastle laba jeer goolal kaga daba keentay Manchester City oo markale laba dhibcood oo muhiim ah lumisay.